ဈေး – Eleven Media Group
အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ နန်းဖာလုံဈေး မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းအထိ မီးငြှိမ်းသတ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အောင်သူထွန်း)
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ နန်းဖာလုံဈေးတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၇၀၀၀ ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး အရောင်းအ၀ယ်များ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားရကြောင်း သိရသည်။
မီးလောင်မှုမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်က လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက် နံနက် ၂ နာရီခန့်မှသာ မီးထိန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်နိုင်ဦးက ဆိုသည်။
“ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ နန်းဖာလုံဈေး စလောင်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်မှာ ဈေးကိုရောက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ မီးကလောင်နေပါပြီ။ နောက် ရက် နံနက် ၂ နာရီတော့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ငြှိမ်းသတ်နိုင်ပါပြီ။ ဆုံးရှုံးမှုကတော့ ပစ္စည်းနဲ့ အဆောက်အအုံတန်ဖိုးပေါင်းရင် သိန်း ၁၇၀၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကတော့ ဈေးသည်တွေတော်တော်နစ်နာမှု ရှိပါတယ်။ ပြန်လည်ပြီး ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒါဆို ဒုတိယအကြိမ်ပါ။ ဒီဈေးက ၉၇-၉၈ လောက်က တစ်ကြိမ်လောင်ဖူးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဈေးပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ဒီလိုမီးတွေ မလောင်နိုင်အောင် မီးသတ်ကား သွားလာနိုင်ဖို့ ဈေးပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အားလုံးနဲ့ ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှာပါ။ ဈေးကို ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြန်လည်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ဈေးရုံကို တည်ဆောက်ဖို့လည်း ရှိသလို ဈေးရုံမတည်ဆောက်ခင်မှာ ယာယီဆိုင်ခန်းတွေ စီစဉ်ပေးမှာပါ”ဟု တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
မီးလောင်မှုအကြောင်းရင်းအား စုံစမ်း စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ဈေးတည်ဆောက်မှု အနေအထားအရ မီးသတ်ယာဉ် ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်ရန် အခက်အခဲရှိရာ မီးငြှိမ်းသတ်ရာတွင် များစွာအခက်တွေ့ခဲ့ကြောင်း၊ မီးလောင်မှုအား အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ မီးသတ်ယာဉ်များလည်း လာရောက်ကူညီခဲ့ကြောင်း၊ မီးလောင်မှုတွင် မီးရှုးမီးပန်းများလည်း ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း တမူးခရိုင် မီးသတ်တာဝန်ခံ ဦးအောင်သူရကျော်က ပြောကြားသည်။
“မီးရှုးမီးပန်းတွေ ဘာကြောင့် ပေါက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကို စိစစ်ဖော် ထုတ်နေဆဲပေါ့။ အဆောက်အအုံနဲ့ အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုတော့ သိထားပါတယ်။ သူတို့ကလည်း အဲဒီအိမ်မှာ လူမနေဘူးလို့ပြောပါတယ်။ မီးငြှိမ်းသတ်ရေးမှာ အဓိကအခက်အခဲရှိတာက ဈေးဖြစ်တဲ့အတွက် ဈေးရုံတွေထဲ မီးသတ်ကားတွေ ဖွင့်ရတော့ လုံခြုံရေးပိုင်းအားနည်း လျော့နည်းသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဘေးက မဆိုင်တဲ့သူတွေ ပါဝင်လာတော့ မီးသတ်ကားသွားဖို့ အဆင်မပြေတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ် ။ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကြတော့လည်း ပစ္စည်းတွေ ရွှေ့ပြောင်းကြတော့ ရပ်စောင့်နေရတာ တွေ့ရပါတယ်။ မီးသတ်ကားတစ်စီးစာသွားဖို့ မလွယ်တဲ့အနေအထားဆိုတော့ မီးသတ်ဖို့အတွက် ကြန့်ကြာမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ရေရရှိရေး စနစ်အနေနဲ့လည်း ဂါလံ ၁၀၀၀၀ ကျော်ဆန့်တဲ့ ရေကန်နှစ်ကန်ရှိတော့ မီးငြှိမ်းသတ်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ မီးငြှိမ်းသတ်ရေးမှာမြို့နယ်ခရိုင်အတွင်းရှိတဲ့ မီးသတ်ကား ၁၂ စီးနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရ်ပြည်နယ် မိုးရေးမြို့ဖက်က နှစ်စီးလည်း လာရောက်ကူညီ ငြှိမ်းသတ်ပေးပါတယ်။ ဈေးကနေ စလောင်တဲ့မီး မဟုတ်ပါဘူး”ဟု မီးသတ်တာဝန်ခံ ဦးအောင်သူရကျော်က ပြောကြားသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် နန်းဖာလုံဈေးမှ ဆိုင်ခန်းအချို့ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- အောင်သူထွန်း)
မီးလောင်မှုမှာ ဗြောက်အိုးများသိုလှောင်ထားသည့် ဂိုဒေါင်နှင့် နေအိမ်မှ စတင်လောင် ကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆရကြောင်း၊ မီးလောင်ရာတွင် ဗြောက်အိုးများကိုပါ လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းကြောင့် မီးလောင်မှု ပိုမိုများပြားခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း နန်းဖာလုံဈေးမှ လုံခြုံရေးမှူး ကိုဟန်ဝင်းကျော်က ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့က တစ်ဖက်နိုင်ငံအိန္ဒိယနဲ့နီးတယ်ဆိုတော့ ခါတိုင်းလည်း သေနတ်တွေ ပစ်နေကြပေါ့။ ပထမကြားတာက ဗြောက်အိုးသံ အဆက်မပြတ်ထွက်တဲ့ဟာ အဲဒါကို တစ်ဖက်နိုင်ငံ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တိုင်း ကျွန်တော်တို့ နန်းဖာလုံ ခြံစည်းရိုးကို မီးရေးထင်းရေးအတွက် ပိုက်တွေ သွယ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ဈေးထဲကနေပြီး မီးရှုးမီးပန်းတွေ ထောင်ထွက်နေတာပါ။ ဒါနဲ့ ဈေးထဲ မီးလောင်နေတာဆိုပြီး အိမ်ထဲ ၀င်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ငြှိမ်းသတ်နေဆဲမှာ ဂိုထောင်ကနေပြီးတော့ ဗုံးကွဲသလို ဗြောက်အိုးတွေကွဲတာ နောက်ကနေ မီးလုံးတွေက လူနောက်လိုက်ခဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့လည်း ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ နန်းဖာလုံဈေး တောင်ဖက် အစွန်ဆုံးထိ ရောက်သွားတယ်။ နန်းဖာလုံဈေးက အိမ်ဝင်းတွေနဲ့ရောနေတာ။ ခြံစည်းရိုးသီးသန့်မရှိဘူး။ နန်းဖာလုံအိမ်ဝင်းမှာရှိတဲ့ ဂိုထောင်အတွင်းဆုံးက စလောင်တာ။ ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာ ဂိုဒေါင်နှစ်လုံးလောင်နေပြီ။ ဗြောက်အိုးတွေကွဲတော့ အဲဒီ ကနေ မွေ့ယာရောင်းတဲ့ ဂိုဒေါင်ကိုကူးပြီး ထပ်ကွဲတော့ လုံးဝမနိုင်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယူဆချက်ကတော့ ဗြောက်အိုးဂိုဒေါင်စလောင်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ စရောက်ချိန်မှာ ဂိုဒေါင်တစ်လုံးက ပေါက်ကွဲပြီး လောင်သွားပြီ။ နောက်ထပ် ပေါက်ကွဲပြီး ကျောခြင်းကပ်ရက် ဂိုဒေါင်ကို ကူးတာ။ အဲဒါကို ငြှိမ်းနေဆဲမှာပဲ ထပ်ကွဲတော့ မနိုင်တော့တာ”ဟု ၎င်းက ဆို သည်။
နန်းဖာလုံဈေးတွင် ဗြောက်အိုးများ သိုလှောင်ထားသည့် ဆိုင်များစွာရှိကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် စိစစ်ကြပ်မတ်မှုများကို ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း မီးလောင်မှုကြောင့် ကျပ်သိန်းနှစ်ရာခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့သူ ဦးမောင်တာက ပြောကြားသည်။
“လူနေအိမ်တွေကနေ ဗြောက်အိုးတွေ ထားတယ်။ အဲဒီကနေ ကူးစက်တာပါ။ ဗြောက်အိုးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိုတော့ တားဆီးပိတ်ပင်မှုလုပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်နောင် ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့ရာပေါ့။ ကျွန်တော့်ဆိုင်ခန်းလည်း ဒီအထဲမှာရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဈေးကော်မတီလည်းဖြစ်တော့ ဆိုင်ခန်းကိုပစ်ပြီး ဈေးရဲ့မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့ ရေရအောင် လုပ်ပေးနေတာပါ”ဟု နန်းဖာလုံဈေးတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ဈေးရောင်းခဲ့သူ ဦးမောင်တာက ပြောကြားသည်။
နန်းဖာလုံဈေးမှာ အိန္ဒိယ- မြန်မာနယ်စပ်တွင် တည်ရှိကာ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုတွင် အဓိကအရေးပါသည့်နေရာတစ်ခုဟု ဆိုနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဈေးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
“နန်းဖာလုံဈေးက အိန္ဒိယ-မြန်မာ ကုန်သွယ်မှုအကောင်းဆုံးနေရာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ မီးလောင်လို့ ပိတ်ထားရတယ်ဆိုတော့ ယာယီထိခိုက်မှုတော့ ရှိပါတယ်။ ဈေးပြန်လည်ဖွင့်နိုင်အောင် ကြိုးစားမှာပါ။ မီးလောင်ပြီဆိုတော့ အမှတ် (၂) ဂိတ်ကနေသွားတဲ့ကုန်သွယ်မှုတော့ ရပ်ဆိုင်းနေပါတယ်။ ပြန်ဖွင့်လို့ရအောင် ကြိုးစားပါမယ်။ ဈေးတစ်ခြမ်းပြန်လည်ဖွင့်လို့ရပါပြီ။ လောင်သွားတဲ့ တစ်ခြမ်းကိုလည်း ယာယီပြန်ဖွင့်မှာပါ”ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တမူးမြို့နယ် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် တည်ရှိသော နန်းဖာလုံဈေးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်နယ်ခုနစ်ခုကို လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ အဓိကရောင်းချနေသောဈေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် မီးတစ်ကြိမ်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ယခုအကြိမ်လောင်ကျွမ်းမှုသည် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ကာ ဆိုင်ခန်း ၅၃ ခန်းနှင့် အိမ်ခုနစ်လုံး ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
Posted in NewsTagged မီးလောင်မှု, ဈေးLeaveaComment on အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ နန်းဖာလုံဈေး မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၇၀၀၀ ကျော် ဆုံးရှုံး
Posted on February 1, 2018 February 1, 2018 by Eleven Media Group
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဈေးတစ်ဈေးမြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)
နံနက် ၅ နာရီခွဲကျော်ကျော် လင်းလုလု အချိန်လောက်ဆိုလျှင် အိမ်အပြင်ဘက်မှ ‘အစ်မ’ လို့ခေါ်ကာ ဆိုင်သော့လာယူသော ဖြူငြိမ်း၏ခေါ်သံကို ကြားရလေသည်။ အိပ်ရာထဲမှာ ကွေးနေသော ဇနီးသည်ကလည်း ‘ဟေ’ လို့ထူးကာ လူးလဲထပြီး ဈေးအိတ်ထဲမှ ဆိုင်ခန်းသော့ကို ထ,ပေးနေကျ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ တောမြို့ဈေးလေးမှာက မြို့ကဈေးရုံတွေလို သူ့အချိန်နဲ့သူ ဖွင့်ရပိတ်ရသော ဈေးမျိုးမဟုတ်။ မနက်လင်းတာနဲ့ ဆိုင်ဖွင့် ခင်းပြီးသားဖြစ်အောင် စောစောလာပြီး ဆိုင်ဖွင့်လေ့ရှိကြသည်။ ဒါကြောင့် ဆိုင်မှာလုပ်တဲ့ ကလေးမလေးကိုဆိုင်ကို စောစောသွား ကြိုဖွင့်ပြီး ခင်းခိုင်းရသည်။ ခဏနေမှ ဇနီးသည်က မျက်နှာသစ်၊ အ၀တ်အစားလဲ ပြင်ဆင်ပြီး နောက်ကနေ ဆိုင်ကို လိုက်သွားရသည်။ အိမ်နဲ့ ဆိုင်နဲ့က ငါးမိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရသည်။ ဆိုင်က အပ်ချုပ်ပစ္စည်းနဲ့ အလှကုန်ဆိုတော့ ပြင်ရဆင်ရခင်းရတာ လက်ဝင်သည်။ ဇနီးသည် ဆိုင်ရောက်သည့် အချိန်အထိ ဆိုင်ကခင်းလို့ မပြီးတတ်သေးတော့ ၀ိုင်းပြီးခင်းရသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေး အတော်ကြာမှ ဈေးကို လိုက်လေ့ရှိသည်။
ဆိုင်က ဈေးအလယ်ကောင်လောက်မှာ ဖြစ်သည်။ ဈေးက စနစ်တကျနဲ့ သူ့အတန်းနဲ့ သူမဟုတ်။ အကုန်လုံး အရောရော အထွေးထွေး ဖြစ်သည်။ အထည်ဆိုင်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်၊ ကုန်ခြောက်ဆိုင်၊ သစ်သီးဝလံဆိုင်၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ မုန့်တီ၊ အသုပ်ဆိုင် စသည်ဖြင့် ရောထွေးနေသည်။ ဈေးမြောက်ဘက်ခြမ်းမှာက ကြက်သား၊ ၀က်သား၊ သားငါးဆိုင်တွေ ရှိသည်။ ဈေးအရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာက အများစုက ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်တွေများသည်။ ငါးသည်၊ ကြက်သားသည်တို့နှင့် ရောနေသည်။
ကျွန်တော်က ဈေးအရှေ့ဘက်ခြမ်း အပေါက်ကပဲဝင်လေ့ရှိသည်။ လူသွားလမ်းကျဉ်းလေးက အမြဲတမ်းလိုလို ဗွက်ထနေတတ်သည်။ သွေးရဲရဲ သံရဲရဲဖြင့် ခုတ်ထစ်နေသော သားငါးဆိုင်ရှေ့က ဖြတ်လျှောက်ရတိုင်း အညှီနံ့က ထောင်းခနဲ နှာခေါင်းထဲ ၀င်လာလေ့ရှိသည်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြိုင်ဈေးခေါ်နေသော အသံတွေဖြင့် ဆူညံနေသည်။ သားငါးတွေကို အမြဲတမ်းခုတ်ထစ်နေရလို့ပဲလား မသိသူတို့ပုံစံတွေကလည်း ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းနေသလို ထင်ရသည်။ ဒါကြောင့်ပဲလားမသိ ရပ်ကွက်ထဲ မိန်းမအချင်းချင်း အော်ဟစ်ရန်ဖြစ်နေတဲ့အခါ ငါးစိမ်းသည်တွေကျနေတာပဲလို့ ပြောကြတာ ဖြစ်ပေမည်။ ဒါကလည်း ဘ၀ပေးအခြေအနေအရ သူတို့မှာ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းနေလို့မရ။ ဣနြေ္ဒကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ နေလို့မရတော့ ဘ၀ရဲ့ ၀မ်းစာအတွက်မို့ နည်းနည်းတော့ အရိုင်းဆန်ရပေမည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈေးသည်တွေကတော့ အနီးအနားကရွာတွေက လာရောင်းကြတာ ဖြစ်သည်။ သူ့ရာသီအလိုက်ပေါ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ဖြစ်သည်။ မှိုပေါက်တဲ့ ရာသီတုန်းကဆိုလျှင် မှိုလာရောင်းကြသူတွေ အတော်များသည်။ အခုရာသီကတော့ ပဲသီး၊ ခရမ်းသီး၊ အာလူး၊ ကြက်သွန်သည်တွေ များသည်။
ဆိုင်က ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီလောက်ဆိုလျှင် လူရှုပ်တတ်သည်။ ရွာကလာရောင်းကြတဲ့ ဈေးသည်တွေက အဲဒီအချိန်ဆိုလျှင် ရောင်းလို့ကုန်ပြီဆိုတော့ သူတို့လိုအပ်တာလေးတွေ အပြန်မှာ ၀ယ်သွားလေ့ရှိကြသည်။ ဆင်းရဲပြီး ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သားတွေမှာ ၀ယ်နေကျပစ္စည်းလေးများ ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၂၀၀ ဈေးတက်သွားပြီးလို့ ပြောလိုက်လျှင် သူတို့မှာ ၀ယ်ဖို့ လက်တွန့်သွားလေ့ရှိကြသည်။ လက်တွန့်မယ်ဆိုလည်း တွန့်စရာပေပဲ။ တက်သွားတဲ့ ဈေးကလည်း ဘယ်တော့မှ ပြန်ကျလေ့မရှိ။ ဒီထက် ထပ်ထပ်တက်ဖို့ပဲရှိသည်။ ငွေကို ဆင်းဆင်းရဲရဲ ရှာဖွေနေရသူတွေအဖို့တော့ ၁၀၀၊ ၂၀၀ ကအစ စိစစ်သုံးစွဲရတာဖြစ်သည်။ ငွေတွင်းနက်တယ်ဆိုတာ သူတို့အသိဆုံးပဲ မဟုတ်လား။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဈေးထဲနေနေရတာဆိုတော့ လူတွေရဲ့သဘောကို ပိုပြီးသဘောပေါက်လာရသည်။ လူတွေအဖို့မှာက ဈေးဆိုတာကို ကင်းကင်းနေလို့ရသည့် အရာမဟုတ်တော့ ဈေးထဲမှာက လူပေါင်းစုံသည်။ လူတန်းစား အလွှာစုံသည်။ ချမ်းသာတဲ့သူ၊ ဆင်းရဲတဲ့သူ၊ နှမြောတွန့်တိုတတ်သူ၊ ရက်ရောတတ်သူ၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူ၊ ကောက်ကျစ်သူစသဖြင့် ဈေးထဲမှာ လူပေါင်းစုံ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဈေးထဲမှာဆိုလျှင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရင်းနှီးသော အပေါင်းအသင်းဖြစ်စေဦးတော့ အပြိုင်အဆိုင်စိတ်နဲ့ တစ်ယောက် ကွယ်ရာတစ်ယောက် အတင်းပြောတတ်သည့် နေရာမျိုးဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင် ဈေးထဲတွင် ဟန်ဆောင်ကောင်းသည့် ဆက်ဆံရေးတို့ထွန်းကားရာ အရပ်ဟုလည်း ဆိုရနိုင်သည်။ မည်သို့ပင် စိတ်ထဲ မကြည်မသာ ဖြစ်နေစေကာမူ ဈေးဝယ်သူကိုတော့ အပြုံးဖြင့် ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်သည်။
ဈေးထဲမှာက တစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်က သူ့အရိပ်အကဲ၊ ကိုယ့်အရိပ်အကဲခတ်နေလေ့ ရှိကြသေးသည်။ တစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က ခပ်တန်းတန်းသာ၊ အခေါ်အပြော သိပ်မရှိ၊ ဘေးချင်းကပ်လျက်ဆိုင်ဖြစ်နေလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ခပ်စိမ်းစိမ်းသာ။ အပြင်မှာတွေ့ကြတော့လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဟန်လုပ်ပြုံးပြ နှုတ်ဆက်ကြနဲ့ ဈေးဆိုတဲ့အတိုင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်း အရောင်းအ၀ယ်ဆန်ဆန် ဖြစ်လာကြသည်ထင်သည်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဆိုင်မှာ တောက်တိုမည်ရ ၀ိုင်းကူရုံ အဆင့်လောက်ပဲ ရှိပါသည်။ သူတို့လို ၀ယ်သူကို ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ပြောပြီး မရောင်းတတ်တော့ ထုတ်သီးကြယ်သီး အော်ဒါမှာပြီး ရိုက်ခိုင်းမှသာ ထုတ်သီးရိုက်ပေးရတဲ့ အလုပ်ပဲရှိပါသည်။ ကျန်တဲ့အချိန်က ကောင်တာမှာထိုင်ပြီး ငွေအမ်းပေးရုံသာပဲ ဖြစ်သည်။
အခုလည်း ဇနီးသည် အိမ်ကို ထမင်းစားပြန်ပြီမို့ ကောင်တာမှာထိုင်လိုက်တော့ ကောင်တာမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ငွေပန်းရနံ့က နှာခေါင်းထဲကို သင်းပြန့်စွာ ၀င်ရောက်လာသည်။ ဇနီးသည်က ဈေးထဲမှာ ပုံမှန်လိုက်ရောင်းနေသော ကလေးမလေးဆီကနေ အမြဲတမ်း ၀ယ်ပြီး ချိတ်ဆွဲထားတတ်သည်။ ကလေးမလေးကလည်း ရာသီအလိုက် ပေါ်တဲ့ပန်းတွေကို သီကုံးပြီး ဈေးထဲက ဆိုင်တွေမှာ လိုက်ရောင်းလေ့ရှိသည်။ ဆိုင်ရှေ့ ရောက်လာပြီဆို ‘အစ်မ ပန်းယူဦးမလား’ ဟု မေးတတ်သည်။ ဇနီးသည်ကလည်း အမြဲတမ်း အားပေးဝယ်ယူနေကျပဲ ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် နေ့စဉ်လိုလို အဲဒီ သားငါးတန်းတွေရှေ့က ဖြတ်ဖြတ်လာခဲ့ရသည်။ ညှီစို့စို့အနံ့တွေ ရှူရှိုက်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ တစ်ခါမှ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်၌ကလည်း ညှီစို့စို့အနံ့တွေ ထွက်လိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ချွေးနံ့လို မကောင်းတဲ့အနံ့တွေ ထွက်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ အနံ့တွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရေမွှေးဖျန်းကြသည်။ ချိုင်းမှာလိမ်းတဲ့ Roll on တွေ သုံးကြသည်။ မနက်လင်းတာနဲ့ ပါးစပ်က အနံ့မထွက်အောင် သွားတိုက်ရသည်။ ချွေးတွေ သံတွေနဲ့ တစ်ရက်လောက် ရေမချိုးမိလျှင် ခန္ဓာကိုယ်က အနံ့တွေ ထွက်ချင်သည်။
ဘ၀ဆိုတာ အမြဲတမ်း အဆိုးချည်းမြင်နေလို့လည်း မရသလို အမြဲတမ်း အကောင်းချည်းပဲ မျှော်လင့်နေလို့လည်း မရနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ခံယူချက်၊ ကိုယ့်အမြင်၊ ကိုယ်လုပ်ဆောင်တဲ့ ကြိုးစားမှုအတိုင်းပဲ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိလာမှာပဲဖြစ်သည်။ နေပူထဲသွားနေသူ နောက်သူ့အရိပ်က နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်နေသလို ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကလည်း နောက်က ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်နေမှာပဲ ဖြစ်သည်။ စိတ်ညစ်စရာ အကြောင်းတွေချည်းတွေးနေရင်တော့ စိတ်ညစ်စရာတွေချည်းပဲ တွေ့ပေလိမ့်မည်။ ကိုယ့်ဘ၀ကို စိတ်သက်သာရာရစေတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကိုလည်း တွေးကြည့်လို့ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော့်မှာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းကို ထပ်ကာတလဲလဲ မတွေးမိပေမဲ့ စိတ်ညစ်စရာ၊ အဆင်မပြေတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ သတိရတိုင်း မကြာခဏတွေးပြီး စိတ်ညစ်နေမိတတ်သည်။
ကဗျာဆရာ ထွန်းဝေမြင့်ရဲ့ ‘ဈေး’ ဆိုတဲ့ ကဗျာကိုဖတ်ပြီး ဈေးထဲက ဆိုင်မှာထိုင်ပြီး တစ်မျှော်တစ်ခေါ် စဉ်းစားနေမိသည်။ ‘အစ်ကို ဒါလေးက ဘယ်လောက်လဲဗျ’ တဲ့။ အသံကြားလို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာက Velvet Lotion ဘူးလေးတစ်ဘူး။ ၆၅၀ ညီမလေးလို့ ပြောလိုက်တော့ ‘ဟင် အရင်က ၆၀၀ ပါ’ ‘ဟုတ်တယ် ညီမလေး။ ၅၀ ဈေးတက်သွားတာ တစ်ရက်နှစ်ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ ၀ယ်ရမလား မ၀ယ်ရဘူးလား ချီတုန်ချတုန်ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံပါပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်း ကဗျာဖတ်ပြီးစမို့ စိတ်ကောင်းလေး ၀င်နေတာနဲ့ ‘ကဲပါ ညီမလေးယူချင်ရင် ၆၀၀ နဲ့ပဲ ယူသွားလိုက်တော့’ လို့ ပြောလိုက်တော့ ကလေးမလေးရဲ့မျက်နှာက လက်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး လက်ထဲဆုပ်ကိုင်လာတဲ့ ၅၀၀ တန် လေးတစ်ရွက်နဲ့ တစ်ရာတန်လေးတစ်ရွက်ကို တစ်ခါတည်းပေးပြီး ၀ယ်သွားလေသည်။ ကျွန်တော်လည်း ဈေးဝယ်သွားတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ကျောပြင်ကိုကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးပြီး ကျေနပ်နှစ်သက်မိတဲ့ ခံစားမှုလေးနဲ့ ပြုံးနေလိုက်မိသည်။
Posted in FeaturesTagged ဈေးLeaveaComment on ဈေး
ပုဇွန်တောင် ၅၂ လမ်း နေ့ညဈေးတွင် ဈေးရောင်းချရန် ဈေးသူဈေးသား ၂၀၀ ကျော်အတွက် ဈေးရောင်းချခွင့် Smart Card များ ထုတ်ပေး
ဈေးသည်များအား ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် Smart Card များ ထုတ်ပေးနေစဉ်
ပုဇွန်တောင် ၅၂ လမ်း နေ့ညဈေးအတွက် ဈေးရောင်းချနိုင်ရန် ဈေးသူဈေးသား ၂၀၀ ကျော်အတွက် ဈေးရောင်းချခွင့် Smart Card များအား ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီဈေးက ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ လမ်းမကြီးမှာ ရောင်းတဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလမ်းဘေးဈေးသည်တွေကို စနစ်တကျ ဈေးရောင်းလို့ရအောင် ပုဇွန်တောင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ စီစဉ်တာဖြစ်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာမြို့တော် စည်ပင်သာယာက တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ၀ိုင်းကူကြပါတယ်။ ၅၁ လမ်းနဲ့ ၅၂ လမ်းက ဈေးသူ ဈေးသားနဲ့ လမ်းသူလမ်းသားတွေ ပြဿနာ မတက်အောင် သံဆူးကြိုးတွေ ကာထားပါတယ်။ ဈေးတဲတွေအတွက် အလှူရှင်ရှာလိုက်တာ Samparoo ကုမ္ပဏီက လှူတယ်။ အဲဒီတဲတွေကို အသေဆောက်ထားတယ်။ မနက်သမားက ပစ္စည်းကိုယူလာမယ်၊ မနက်ရောင်းမယ်။ ၁၂ နာရီကျရင် သူကသူ့ပစ္စည်းနဲ့ သူ့အမှိုက်ကို သိမ်းရမယ်။ အမှိုက်ထားမယ့် နေရာလည်း ထားထားတယ်။ အမှိုက်အိတ်တွေလည်း ထားထားတယ်။ မီးကိုလည်း မြို့နယ်မန်နေဂျာနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီက လှူတယ်။ တစ်ဆိုင်ကို မီးတစ်လုံးထွန်းထားတယ်။ ညဘက်ပိုင်းကိုတော့ လုံခြုံရေးထားတယ်။ ၀န်ထမ်းနှစ်ယောက် ထားတယ်။ Smart Card ရပြီးတဲ့သူတွေက ရပြီးပြီးချင်း ဈေးရောင်းချလို့ ရပါပြီ။ ဈေးဖွင့်ပွဲကိုတော့ ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ ဒုတိယပတ်မှာ ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
ဈေးသူဈေးသားများအတွက် ထုတ်ပေးသည့် Smart Card တစ်ခုသည် ကျပ် ၅၀၀ ခန့်သာ ကျသင့်သော်လည်း အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များအတွက် တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၁၅၀၀၀ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နံနက်ပိုင်းရောင်းချမည့် ဈေးသည် ၉၅ ဦးနှင့် ညနေ ပိုင်းရောင်းချမည့် ဈေးသည် ၁၂၅ ဦးခန့်ရှိကြောင်း ဈေးဆိုင်တဲများအတွက်လည်း တစ်ဦးလျှင် ၁၅၀၀၀ ခန့်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“၅၂ လမ်း နေ့ ညဈေးကို ရွှေ့ရတဲ့အတွက် သိပ်ပြီးအဆင်ပြေမလားဆိုတော့ ထင်လည်းထင်တယ်။ မထင်လည်း မထင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကောင်းတာလုပ်ပေးတဲ့အတွက် ပြောင်းတာက ပြောင်းရမှာပဲ၊ အဆင်မပြေလည်း ပြောင်းရမှာပဲ။ ကိုယ်တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်း ဆန္ဒမဖြစ်ဘူးလေ၊ ခက်ခဲနေတာက ဘာလဲဆိုတော့ အသုပ်ရောင်းတယ်ဆိုတော့ ဆိုင်ခုံရှိရမယ်။ လက်ရှိရောင်းတာက လမ်းဘေးမှာ ရောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခုံအစုတ်နဲ့ ရောင်းလည်း အဆင်ပြေတယ်။ အခုပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ အကုန်လုံးကို အသစ်တွေဝယ်ရမယ်။ နေတာက ဒေါပုံမှာဆိုတော့ ပစ္စည်းတွေကို ဒေါပုံကိုပြန်သယ်ဖို့ ကားခက အသွားအပြန် ၄၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။ အမြတ်ကလည်း အဲဒီလောက်မရှိတော့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ ကျွန်မရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေက လမ်းသွားလမ်းလာတွေက အလွယ်တကူဝယ်စားတဲ့ဟာ။ အခုလိုပြောင်းလိုက်တဲ့နေရာကို တကူးတက လာမ၀ယ်စားလောက်ဘူး” ဟု အသုပ်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ပဲပြုတ် ရောင်းချသည့် မခိုင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ၅၂ လမ်း နေ့ညဈေးတွင် ဈေးခန်းပေါင်း ၁၃၀ ခန့်ရှိကြောင်း၊ ဈေးတဲများသည် ရှစ်ပေကျော်ခန့်ရှိကြောင်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင် ဘုရားလမ်း၊ အောက်ပုဇွန်တောင်နှင့် အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းရှိ ဈေးသည်များကို စာရင်းကောက်ယူခဲ့ကြောင်း၊ ဈေးသည်များကို ဈေးနေရာအတွက် မဲနှိုက်ရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဦးခင်မောင်ဝင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ယင်းပုဇွန်တောင် နေ့ညဈေးတန်း ဈေးရောင်းချခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် မူလရောင်းချခဲ့သည့်နေရာတွင် ခြောက်ရက်ခန့်အထိ ရောင်းချနိုင်သေးကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ ၃ ရက်တွင် နေ့ညဈေးတန်းသို့ လာရောက်ရောင်းချခြင်းမပြုပါက ရရှိထားသည့် ဆိုင်ခန်းနေရာကို ပြန်လည်သိမ်းယူခံရမည်ဖြစ်ပြီး ယခင်ရောင်းချသည့် နေရာအတိုင်း ဈေး ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်ပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေဖြင့် အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆိုင်ခန်းနေရာရရှိသူများအနေဖြင့် တစ်ဆင့် ပြန်လည်ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိကြောင်း၊ ရေဖိုး၊ အမှိုက်၊ လုံခြုံရေးနှင့် မီတာခများအတွက် လစဉ်ကြေးပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအဖိုးအခများအတွက် မြို့တော်စည်ပင်နှင့် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
Posted in NewsTagged ဈေးLeaveaComment on ပုဇွန်တောင် ၅၂ လမ်း နေ့ညဈေးတွင် ဈေးရောင်းချရန် ဈေးသူဈေးသား ၂၀၀ ကျော်အတွက် ဈေးရောင်းချခွင့် Smart Card များ ထုတ်ပေး
ဈေးတွေကို အဆင့်မြှင့်ရမှာလား၊ လမ်းတွေကို ချဲ့ရမှာလား . . .
နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးအား ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)
“ယခု ရန်ကုန်မြို့ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြဿနာတွေ တော်တော်များများကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ရေကြီးရေလျှံမှု၊ ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု၊ အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှု၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အားလုံးပါပဲ” ဟု ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ သန်းမြင့်အောင်က ပြောကြားသည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးမြို့ကြီးများတွင် ကြုံတွေ့ကြရသည့် ယင်းကဲ့သို့ ပြဿနာများသည်လည်း ရန်ကုန်မြို့တွင် ကြုံတွေ့နေကြရသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းရာတွင် အဓိကဖြေရှင်းရန် လိုအပ်နေသည့် ကိစ္စရပ်များကို ပိုမိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေသည်။
နှစ်စဉ် မိုးတွင်းကာလတွင် ကြုံတွေ့လေ့ရှိသော ရေကြီးရေလျှံမှု ပြဿနာ၊ ယခုတာဝန်ယူထားသည့် အစိုးရအထိ အဆက်ဆက် ယင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ ထို့ပြင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူတန်းစား အသီးသီး နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရသည့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာများ၊ ကားပါကင် အခက်အခဲများကဲ့သို့သော အဓိကဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပြီး ပိုမိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်က ပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၃ ရက်မြောက်နေ့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ခြောက်လအတွက် ရသုံးခန့်မှန်း ခြေငွေစာရင်း (လျာထားချက်) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ၏ သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာအရ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနနှင့် အင်ဂျင်နီယာ (အဆောက်အအုံ) ဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ငွေလုံးငွေ ရင်းအသုံးစရိတ်လျာထားချက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးမှ အဆောက်အအုံ ၁၄ လုံး၊ သိမ်ကြီးဈေး အေရုံ၊ ဘီရုံပြုခြင်း၊ ပြင်ခြင်း၊ အင်းစိန်ဈေးကြီးများပြုခြင်း၊ ပြင်ခြင်းနှင့် မြို့နယ်အသီးသီးရှိ ဈေးဟောင်းလေးခုကို အဆင့်မြှင့်တင် ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဈေးက ခြောက်လအတွင်း ပြင်နိုင်ပါ့မလား။ တချို့အင်းစိန်ဈေးဆိုရင် အကြီးစားကြီးပြင်မှာ။ ဈေးသူဈေးသားတွေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မှာတုန်း။ အဲဒီစီမံချက်တွေ ဆွဲပြီးပြီလား။ စီမံချက်လည်း စည်ပင်က ပီပီပြင်ပြင် မရှိသေးဘူး။ ငွေသာတင်တာ” ဟု ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျက ပြောကြားသည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ချေးငွေယူထားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သင့်၊ မသင့်ကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကလည်း စည်ပင်ကနေ ဒီဇိုင်းခတွေ တင်တဲ့သဘော။ မလုပ်သေးဘူးပေါ့။ အစိုးရ အဖွဲ့ကလည်း ဒါလေးတော့ မကန့်ကွက်ပါနဲ့။ အပြင်မှာ ညှိနှိုင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ မထတော့ဘူး ဖြစ်သွားတာ။ အတည်ပြုလိုက်ရတာပေါ့။ ဒီခြောက်လကတော့ ဒီဇိုင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကိုလည်း တင်ပြထားပြီးပြီပေါ့။ အသုတ်လိုက်၊ အသုတ်လိုက် အကန့်လိုက်လုပ်မယ်ဆိုတာကို ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းခတို့၊ အကြံပြုခတို့ ဒီခြောက်လမှာ သုံးမှာ။ တကယ်လုပ်ဖို့ဟာ တားထားတယ်။ အင်းစိန်ဈေး အကြီးစားပြင်တာကတော့ တကယ်လုပ်မှာ” ဟု အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ဇေယျက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းပေါ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးကြီးတွင် ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (YHT) ၏ ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ်အထိမ်းအမှတ် ၁၆ ခုမြောက် အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြားကို ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်က တပ်ဆင်ခဲ့သည်။
“ဒီဈေးကြီးဟာ အထူးအောင်မြင်တဲ့ အမွေအနှစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကြီးဟာ လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအတွက် ရွှေတိဂုံဘုရားပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အရေးကြီးဆုံးဆွဲဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မြို့နေပြည်သူတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြို့လယ်ပြန်လည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာစေရေးအတွက် မှီခိုအားထားရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဒီအမွေအနှစ်နေရာကို မသင့်လျော်တဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေ၊ အနီးအနားဝန်းကျင်မှာလည်း မဆီလျော်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေ (ဥပမာပြောရရင် လမ်းချဲ့တာမျိုး) ဒါ့အပြင် မီးနဲ့အခြား ဘေးအန္တရာယ်တွေကနေ သတိရှိရှိ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (YHT) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန့်မြင့်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကို ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် အရေးပါသည့် နေရာဖြစ်လာကာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရန်ကုန်မြို့နေ လူတန်းစားအသီးသီးအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ဖက်ရှင်အ၀တ်အထည်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ နေ့စဉ်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရာနှင့် အားလပ်ချိန်လည်ပတ်ရာ အဓိကနေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ ယင်းဈေးကြီးသည် မြို့နေများအတွက်သာမက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအား အနုပညာပစ္စည်းများ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများဖြင့် ဆွဲဆောင်နိုင်သော နေရာလည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ခြောက်လအတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်တွင် ဈေးများတည်ဆောက်ရန်အတွက် အကြောင်းအရာဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၆၈၀ လျာထားကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဈေးပေါင်း ၁၇၆ ခုကို ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စည်ပင်နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဈေး ၁၀ ခုကို တည်ဆောက်ရန် စတင်နေကာ အဆိုပါ ဈေးများတွင် ကားပါကင်များကိုပါ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“လမ်းဘေးမှာ ကားတွေရပ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့ ကားပါကင်တွေတကယ် ကားတွေကို စနစ်တကျ ထားပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေကို တည်ဆောက်ရင်းနဲ့ တစ်ဖက်က ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဈေးပေါင်း ၁၇၆ ဈေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပထမအဆင့်ဈေး ၂၀ ကို တည်ဆောက်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ စည်ပင်သာယာနယ်နိ မိတ်အတွင်းမှာ ဈေး ၁၀ ခု လောက်ကို တည်ဆောက်ဖို့ စတင်နေပါတယ်။ ဒီနေရာတွေမှာ ကားတွေကို ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေ ထည့်သွင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရာစီမံကိန်း အသစ်တွေမှာလည်း ကားတွေထားဖို့နေရာကို စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းမပေါ်ကကားတွေကို နေရာတစ်ခု ရွှေ့ထုတ်မယ်ဆိုရင် ထွက်ပေါက်တစ်ခုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားထားလို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုကို စီစဉ်ပြီးမှ ဒီဘက်က အခြေအနေတစ်ခုကိုဆောင် ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အဆင့်မြှင့်မည့် ဈေး ၂၁ ခုတွင် ပါဝင်သည့် ဘိုကလေးဈေး၊ မြရတနာဈေးနှင့် ရန်ကင်းမြို့မဈေးတို့အတွက် စီမံကိန်းပုံစံနှင့် ဒီဇိုင်းခေါ်ယူခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာအသင်းမှ သိရသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းက ကြီးမှူးပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ဘိုကလေးဈေးနှင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် မြရတနာဈေး အသစ်ဆောက်လုပ်မည့် ဈေးအတွက် စီမံကိန်းပုံစံ (Master Plan) နှင့် အဆောက်အအုံဒီဇိုင်း (Architectural Conceptual Design) များ ရွေးချယ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ရန် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အဆင့်မြှင့်တင်မည့်ဈေး ၂၁ ခုအထိရှိပြီး သိမ်ကြီးဈေးစီရုံ၊ ကြည့်မြင်တိုင် လဟာပြင်ဈေးအပြင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်စံပြဈေးတို့ ပါဝင်ကြောင်း ဧပြီ ၂၅ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (န၀မနေ့) မှ သိရသည်။
အဆိုပါ ဈေးများအဆင့်မြှင့် တင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေးဦးက မေးမြန်းခဲ့ရာ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးအစား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်သောင်းက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
“ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီရဲ့ ကွပ်ကဲမှု လက်အောက်ကနေ လက်ရှိဈေးတွေကို ခေတ်မီအဆင့်မြင့်ဈေးတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ရရှိလာတဲ့ ဘတ်ဂျက်ဘောင်အတွင်းက မဟုတ်ဘဲနဲ့ PPP နဲ့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဈေးတွေကို ဦးစားပေး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဈေးပေါင်း ၂၁ ဈေး ရှိပါတယ်။ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် သိမ်ကြီးဈေးစီရုံအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအဆင့်ဈေးများ ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းမှာ သိမ်ကြီးဈေးစီရုံအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာအသင်းကို ဘယ်လိုအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်မလဲ ဆိုတာကို ဒီဇိုင်းပုံစံပြိုင်ပွဲခေါ်ယူခြင်း၊ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့အညီဆောက်ဖို့အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း အဆင့်ဆင့် စနစ်တကျဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ ခေါ်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် သိမ်ကြီးဈေးစီရုံကို ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့ ဈေးကြီးအင်္ဂါရပ်နဲ့အညီ ဈေးကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါတယ်” ဟု ၀န်ကြီးဦးမြင့်သောင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၏ ညဈေးသည်လည်း သိမ်ကြီးဈေးစီရုံကဲ့သို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ၏ စီမံကွပ်ကဲမှုတွင် ခေတ်မီဈေးများ ဆောက်လုပ်ရန် အစီအစဉ်၌ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စံပြဈေးကို ခေတ်မီဈေးအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီး လက်ရှိတွင် တင်ဒါဒီဇိုင်းခေါ်ယူရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရဲ့ ညဈေးဟာလည်း အလားတူပဲ သိမ်ကြီးဈေးစီရုံကဲ့သို့ပဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့အညီ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရဲ့ စီမံကွပ်ကဲမှုမှာ ခေတ်မီဈေးများဆောက်လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်မှာ ပါပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်ဟာ ပထမအဆင့်ဦးစားပေးအနေနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ဈေးပေါင်း ၂၁ ဈေးထဲမှာ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် လဟာပြင်ဈေးလည်း ပါပါတယ်။ ခေတ်မီဈေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလည်း Public Private Partnership စနစ်နဲ့ တည်ဆောက်သွားဖို့ ကောင်အထည်ဖော်သွားဖို့ အစီအစဉ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၀န်ကြီးဦးမြင့်သောင်းက ပြောကြားသည်။
“စံပြညဈေးရဲ့ ဒီဇိုင်းခေါ်ယူဖို့ စီစဉ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စံပြဈေးကို ခေတ်မီဈေးအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတော့ လောလောဆယ် တင်ဒါဒီဇိုင်းခေါ်ယူရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် လျာထားချက်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက အနီးကပ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မည့် အရှေ့တောင်အာရှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် စတင်သုံးစွဲမည့် ၇၅၀ ဒသမ ၅၈၉ ကျပ်သန်းသုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ရေကြီးရေလျှံမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ရန်ပုံငွေနှင့် အဆောက်အအုံများ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၂၄ သန်းတွင် အပိုင်း (၁) အရှေ့တောင်အာရှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အာမခံရန်ပုံငွေထူထောင်တဲ့နေရာ၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၀ နှင့် ထောက်ပံ့ငွေ တစ်သန်း၊ အပိုင်း(၂)တွင် မြို့ပြရေကြီးရေလျှံစီမံခန့်ခွဲခြင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၇ သန်း၊ အပိုင်း (၃) တွင် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု အဆောက်အအုံများ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂ သန်းနှင့် အသိပညာပေးခြင်းနှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးသန်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ရေကြီးရေလျှံမှုအတွက် အသုံးပြုမည့် ဒေါ်လာ ၇၇ သန်းသည် Downtown ခြောက်မြို့နယ်တွင် တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါမြို့နယ်များနှင့် ထိစပ်နေသည့် ဆိပ်ကမ်း၊ ဒဂုံ၊ အလုံ၊ ဗဟန်းနှင့် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်များသည်လည်း သွယ်ဝိုက်အကျိုးခံစားခွင့် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းသည် ခြောက်နှစ်တာစီမံကိန်း ကာလဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်အပိုင်းသုံးတွင် ပထမဦးစားပေးအဖြစ် ဂျိုးဖြူရေလှောင်တမံ၏ အဆောက်အအုံ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ဒုတိယဦးစားပေးအဖြစ် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ လေမှုတ်စက်ရုံပြုပြင်ခြင်း၊ တတိယ ဦးစားပေးအနေဖြင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ရေတွန်းစက်ရုံပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ စတုတ္ထဦးစားပေးမှသာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးနှင့် ပဉ္စမဦးစားပေးအနေဖြင့် သိမ်ကြီးဈေးအေရုံနဲ့ ဘီရုံပြုပြင်ခြင်းစသည့် အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဟု ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လက်ရှိအချိန်တွင် ဂျိုးဖြူရေလှောင်ကန်လောက် အရေးမကြီးသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး ၁၄ ရုံပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် သိမ်ကြီးဈေး ဈေးရုံပြင်ဆင်ခြင်းများကို သဘောမတူနိုင်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး အသေးစား၊ အကြီးစား ပြင်ဆင်မှုများကို နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်များတွင်လည်း တောင်းခံနေကြောင်း၊ ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ် ခြောက်လဘတ်ဂျက်အတွင်းမှာလည်း ဈေးရုံကြီးများ အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းခေါင်းစဉ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးပြင်ဆင်ရန် ကျပ်သန်း ၁၄၀ တောင်းခံထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
“ဒါ့အပြင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ စီမံကိန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး လာရောက်ရှင်းပြစဉ်က အပိုင်းနှစ်ထဲမှာရော အပိုင်းသုံးထဲမှာရော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်း ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလမ်းနဲ့ တံတားလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ရန် လုံးဝမပါရှိဘူး။ တွေ့လည်း မတွေ့ရပါဘူး။ အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံများ မွမ်းမံခြင်း၊ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ခြင်း၊ စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ၀န်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ပဲ ပါဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ သို့ပါသောကြောင့် ကျွန်မတင်ပြလို တာကတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ခြောက်လဘတ်ဂျက်မှာ တောင်းခံထားတဲ့ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု အဆောက်အအုံများ ဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအတွက် တောင်းခံထားတဲ့ ကျပ်သန်း ၂၅၀ ဒသမ ၈၅၆ သန်းနဲ့ လမ်းတံတား လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ ၂၄၈ ဒသမ ၄၀ ကျပ်သန်းအား သဘောမတူပါသဖြင့် ၎င်းလုပ်ငန်းများ ပယ်ဖျက်ပေးရန်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ မြို့ပြရေကြီး ရေလျှံမှု အန္တရာယ်များ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ရေမြောင်းစနစ်နှင့် မြစ်ထွက်ပေါက်များအကြားမှာ ထပ်မံလိုအပ်လာနိုင်သော မြေအောက်မြောင်းများ၊ ရေသိုလှောင်နိုင်သော နေရာများ လိုအပ်သော အရွယ်အစားရှိတဲ့ ခေတ်မီမြစ်ထွက်ပေါက် ရေတံခါးများတည်ဆောက်ခြင်း၊ မြစ်ထွက်ပေါက်များတွင် အလိုအလျောက် ရေထိန်းတံခါးများ၊ စွမ်းအားမြင့် ရေစုပ်ရေထုတ်စက်များ၊ အမှိုက်စစ် ဆန်ခါများ၊ အရံမီးစက်များပါဝင်မယ့် စနစ်တစ်ခုလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အလိုအလျောက် စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်စနစ်များ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းတို့ကိုသာ ယခုနှစ်ခြောက်လဘတ်ဂျက်မှာ စတင်လျာထား ဆောင်ရွက်ပေးရန် တင်ပြအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးကြီး ပြင်ဆင်ခြင်းထက် ပြည်သူတွေအတွက် အမှန်တကယ်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသောကြောင့် တောင်းခံထားရှိတဲ့ ကျပ်သန်း ၇၅၀ ဒသမ ၅၈၉ သန်းထဲမှ လုပ်ငန်းပြင်ဆင်သုံးစွဲပေးရန် တင်ပြအပ်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ပြောကြားသည်။
ရေကြီးရေလျှံမှု ပြဿနာသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မိုးတွင်းကာလ ရောက်ရှိပါက ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူများ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်ကြသူများ နေအိမ်များသို့ ရေများဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ကြရသည်။ ထို့ပြင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူတန်းစားအသီးသီး နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရသည့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာများ၊ ကားပါကင် အခက်အခဲများကဲ့သို့သော အဓိက ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပြီး ပိုမိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
ယခင်အစိုးရလက်ထက်က ကားတင်သွင်းမှု မူဝါဒအပြောင်းအလဲကြောင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ယာဉ်အစီးရေအများအပြား ၀င်ရောက်လာခဲ့သည်။ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ သုံးစွဲနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ၊ စည်းကမ်းမဲ့ ယာဉ်ရပ်နားမှုများအား ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအားနည်းသည့် အခြေအနေများနှင့် ကားပါကင်များ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့် အခြေအနေတွင် ကားများအလုံးအရင်းဖြင့် ၀င်ရောက်လာခြင်းကြောင့် ကားပါကင်ပြဿနာများ ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။
ယာဉ်ရပ်နားမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများအတိအကျ သတ်မှတ်ခဲ့မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ယင်းသို့ ကားပါကင်ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီး အဆိုပါပြဿနာသည် ယခုအစိုးရသစ် လက်ထက်တွင်လည်း စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးတွင် လူစီးကား အမျိုးအစားအရေအတွက် အဆမတန်များပြားလာသည်။ ထို့ကြောင့် ကားပါကင်ပြဿနာသည် မော်တော်ယာဉ်မောင်းတိုင်း၊ မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်သူတိုင်း ကြုံတွေ့ကြရသည့် နိစ္စဓူဝအကြောင်းအရာ ဖြစ်သည်။ မော်တော်ယာဉ်များ ရပ်နားထားမှုနှင့် ယာဉ်သိပ်သည်းဆ များပြားလာမှုသည် လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက် လူသွားလမ်းမရှိသည့် အခြေအနေအထိအောင် အချို့သောနေရာများတွင် ဖြစ်ပွားသည်။
“ကားပါကင်ကတော့ ပိုကောင်းလာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်” ဟု မြို့ပြပညာရှင် ဒေါက်တာကျော်လတ်က ပြောကြားသည်။
ယခင်အစိုးရ လက်ထက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက် ည ၇ နာရီခွဲခန့်က ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ လှည်းတန်းလမ်းတွင် ကားပါကင်နေရာလုရာမှ စကားများရန်ဖြစ်ကာ ဓားဖြင့်ထိုးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းအဖြစ်အပျက်သည် တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာဖြစ်ပြီး ထိုဖြစ်စဉ်မှာ ရန်ကုန်မြို့၏ ကားပါကင်ရှားပါးမှုပြဿနာကို မီးမောင်းထိုး ပြလိုက်သလိုလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ယာဉ်အစီးရေ ၅၂၉၄၇၃ စီးအထိရှိလာပြီး မော်တော်ယာဉ်များသည် လစဉ်တိုးပွားလျက်ရှိကာ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုများ၊ ယာဉ်ရပ်နားရန် အခက်အခဲများသည် နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုများ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများ တည်ဆောက်ခြင်း ကဲ့သို့သော အဓိကအရေးကြီးသည့် ဦးစားပေး အခြေအနေများအတွက် လိုအပ်သည်များကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက် ဘတ်ဂျက်လျာထားချက်များတွင်လည်း ယင်းကဲ့သို့ ကဏ္ဍများတွင်လည် ပိုမိုထည့်ဝင်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
“အဓိကကတော့ မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ အဆောက်အအုံတော်တော် များများမှာ ကားရပ်နားရာနေရာတွေ ထည့်ပြီးတော့ ဆောက်ပေးစေချင်တယ်။ ကားပါကင်ပဲ သီးသန့်အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်ပြီးတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကားရပ်နားခတွေကို ကောက်ခံမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြို့ပတ်ရထားရှိတဲ့ ဘူတာလိုနေရာမှာ နိုင်ငံခြားလိုမျိုး ဘူတာအောက်မှာ ရထားလမ်းသွားပြီး၊ အပေါ်မှာ အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်နည်းဖြေရှင်းလို့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကမ်းနားမှာရှိတဲ့ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းပေါ့။ အခု ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းက အသုံးပြုနေတုန်းပဲဆိုတော့ တကယ်လို့များ အနာဂတ်မှာ သီလ၀ါကိုသာ အဓိကပြောင်း ရွှေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆိပ်ကမ်းနေရာတွေမှာ ကားပါကင်နေရာတွေ ပေးထားခဲ့လို့ရမယ်ဆိုရင် ဖြေရှင်းပေးလို့ရမှာပါ” ဟု ဂျပန်မြို့ပြပညာရှင် Kuniomi Hirano က ကားပါကင် ရရှိနိုင်မှုအတွက် အကြံပြုပြောကြားသည်။
ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမည်ဆိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ပြောကြားခဲ့သည့် မြေအောက်မြို့တော် အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ဘဲ ရေများဝင်ရောက်ပြီး ရေအောက်မြို့တော် ဖြစ်သွားမည်ဟု မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်ရှင်းက ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၊ ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၂၀) ရက်မြောက်နေ့တွင် ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
“ရေကြီးရေလျှံမှုတွေ ဆက်လက်ပြီး ဖြစ်ပွားနေမယ်ဆိုရင် မြို့တော်ဝန်ကြီး ပြောကြားထားသော မြေအောက်မြို့တော်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြေအောက် မြို့တော်ကြီးဟာ ရေကြီးရေလျှံရင် ရေတွေဝင်ပြီး ရေအောက်မြို့တော် ကြီးဖြစ်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆိုကို အတည်ပြုဖို့အတွက် လွှတ်တော်မှာ မဲမခွဲပါဘူး။ သို့သော်လည်း ပဲမှတ်တမ်းတင် လေ့လာစောင့်ကြည့်အဆင့် ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမှသာလျှင် အနာဂတ်ကာလမှာ ဒါမျိုးတွေ မဖြစ်ပွားရေးအတွက် တစ်မျိုးသားလုံး ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ကြပ်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တော်ဝန်ကြီး ပြောတဲ့အတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ရုံမကဘဲနဲ့ မှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့်ဆိုတဲ့ အနေအထားကို ရောက်ရှိစေချင်ပါတယ်” ဟု မရမ်းကုန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်ရှင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးသစ်လက်ထက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အများပြည်သူအတွက် အရေးပါသည့် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး မြို့တော်အဖြစ် အဓိကအချက်အချာကျဆဲဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့၏ မြို့ပြဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများသည် အမှန်တကယ် လက်တွေ့လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် အလွန်အရေးကြီးသည်။
“သုံးသင့်သုံးထိုက်တာကို မသုံးဘူး၊ ရသင့်ရထိုက်တာတွေလည်း ရအောင်မလုပ်ဘူး” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျက ပြောကြားသည်။
ယခုလက်ရှိတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေနှင့် ဈေးများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဘတ်ဂျက်များ တင်ပြတောင်းခံမှုများလည်း ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
အခွန်ထမ်းပြည်သူတို့ထံမှ ကောက်ယူရရှိသည့် အခွန်ငွေများအား ပြည်သူများအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် သိုမဟုတ် ပိုမိုလိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ဦးစားပေး သုံးစွဲသင့်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် လူ စည်ကားရာနေရာများတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများဖြစ်သည့် ဈေးဝယ်စင်တာများ (Shopping Center) များသည် အစီအရီ ပေါ်ပေါက်လာနေပြီး အချို့ဈေးဝယ်သူများ၏ ပုံစံများသည်လည်း နည်းပညာတိုးတက်လာသည်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှတစ်ဆင့်မှာယူ ၀ယ်ယူခြင်းများ ရှိလာကြသည်။
ယင်းအခြေအနေ အကျိုးအကြောင်းများကို ကြည့်ပါကလာမည့် နှစ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် ချင့်ချိန်ကာ ယခုလက်ရှိ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေများ စိုက်ထုတ်ပြီး ဈေးများပြုပြင်ရန်၊ ဆောက်လုပ်ရန် စီစဉ်နေမှုများသည် ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုနှင့် ပြည်သူတို့ လိုအပ်ချက် ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိကိုမူ လက်ရှိတာဝန်ယူထားသော အစိုးရက ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးကို တာဝန်ယူပြီးနောက် ၎င်းအနေဖြင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများကို ဖြေရှင်းသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုလက်ရှိအချိန်ထိမူ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများမှာ ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ပြီး လျော့ကျသွားခြင်း မရှိကြောင်း ဝေဖန်မှုများလည်း ရှိနေသည်။
ထိုကဲ့သို့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် Control Center ကဲ့သို့သော လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းရာတွင် အချိန်မီ မပြီးမြောက်ခြင်းများသည့် ရန်ကုန်မြို့ နေပြည်သူများ အခွန်ထမ်းပြည်သူများအတွက် နေ့စဉ်နစ်နာမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ခြောက်လအတွက် ရငွေသုံးငွေစာရင်း (လျာထားချက်)တွင် အခွန်အကောက်ရငွေသည် ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၆၅၉၆ ဒသမ ၉၇၈ ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အခွန်အကောက်ရငွေထဲမှ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ရရှိသည့် အခွန်အခများတွင် ပစ္စည်းခွန်နှင့် ဘီးခွန်များပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်း ၁၀၁၁၆ ဒသမ ၆၃၈ ရရှိကြောင်း သိရသည်။
သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ အနေနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အခွန်ငွေများပိုမိုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြည်သူ့အခွန်ဘဏ္ဍာများဖြင့် ဈေးများအား အဆင့်မြှင့်တင် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန် လုပ်ဆောင်နေခြင်းများသည် လတ်တလောချက်ချင်း အကောင်အထည်ဖော် ရန်လိုအပ်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် ပြည်သူများအနေနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက် ဈေးဝယ်ယူမှုများကို နီးစပ်ရာ Convenience Store များ၊ ရှော့ပင်းစင်တာများရှိ Market Place ကဲ့သို့သော နေရာများတွင် ၀ယ်ယူခြင်းများ ရှိလာနေပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဈေးများအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများမှာ အပူတပြင်းလိုအပ်သည့် အကြောင်းအရာမဟုတ်သည်မှာ ပေါ်လွင်နေသည်။
ပြင်ဆင်မှုများကို လုပ်ဆောင်လိုပါကလည်း ဈေးသူ၊ ဈေးသားများထံမှ ရရှိသည့်အခွန်အခများ၊ ၎င်း၏ ဘဏ္ဍာငွေကြေးများဖြင့်သာ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ အခြားသော ပြည်သူများထံမှ ကောက်ခံရရှိသည့် အခွန်ဘဏ္ဍာများဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်မှာ အခြားသော ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်လောက် အရေးမကြီးကြောင်း ဆိုရပေမည်။
ထို့ပြင် အခွန်ဘဏ္ဍာများကို ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ များပြားသည့်နေရာများ၊ လမ်းအကျယ်အ၀န်း မလုံလောက်သည့်နေရာများတွင် လမ်းချဲ့ထွင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာ မလုံလောက်သည့် နေရာများတွင် ကားများရပ်နားနိုင်ရန် ကားပါကင်များ အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ဆောင်သင့်ပေသည်။ လူနေထူထပ်သည့် နေရာများ၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ ထူထပ်များပြားသည့်နေရာများတွင် ကားပါကင်များ ဖော်ဆောင်ပေးရန်မှာ များစွာလိုအပ်လာနေပြီ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ လမ်းအခြေအနေများတွင် လမ်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး မည်ကဲ့သို့ ယာဉ်ကြောများ ပိုမိုသွားလာလွယ်ကူအောင် လမ်းများချဲ့ထွင်ကာ လုပ်ဆောင်မည်ဆိုသည့် ကိစ္စရပ်များကို စဉ်းစားကာ ပြည်သူ့ဘတ်ဂျက်များ ထည့်သွင်းသုံးစွဲပြီး ဆောင်ရွက်ကြရမည့် အချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ ဗဟိုလမ်းကဲ့သို့ လမ်းမသည် အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ပြည်လမ်းမကြီးတို့နှင့် အပြိုင်တည်ရှိနေပြီး ယာဉ်သွားလာမှု များပြားသည့်လမ်းမလည်း ဖြစ်သည်။ သမိုင်း၊ အင်းစိန်ဘက်မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ ရောက်ရှိအောင် ရထားလမ်းနှင့်အပြိုင်သွားလာနိုင်သည့် အနေအထားလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိတွင် ယာဉ်သိပ်သည်းမှု အနည်းငယ်သာသွားလာနိုင်ပြီး ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ကြုံတွေ့နေရဆဲလည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအခြေအနေများပေါ်တွင် သုံးသပ်ပြီး ဗဟိုလမ်းကဲ့သို့သော လမ်းမများတွင် ယာဉ်များ ပို့မိုသွားလာနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖော်ဆောင်နိုင်မရှိသေးသည့် ရှစ်လမ်းသွား၊ ၁၀ လမ်းသွားလမ်းမကြီးများ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် အခြေအနေများကို ချင့်ချိန်သုံးသပ်ကာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေများကို အခြေခံအဆောက်အအုံ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်တွင် အသုံးပြုကာ လက်ရှိရန်ကုန်တွင်ကြုံတွေ့ရသည့် ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ကြရမည့် အချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ရန်ကုန်မြို့၏ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုသည် ပိုမိုများပြားလာမည့်ဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်ထပ်လမ်းမကြီးများကို စတင်အကောင်အထည် ဖော်ရတော့မည့်အချိန်လည်း ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကာလတွင် ရန်ကုန်မြို့ကြီးသည် Mega City အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေထူထပ်မှုများ၊ သွားလာမှုများသည် ပိုမိုများပြားလာမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များ၊ ကားရပ်နားရန် နေရာလိုအပ်ချက်များမှာ ပိုမိုများသထက်များလာမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကို လိုက်လံဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အခြားသောအဓိကမကျသည့် နေရာများတွင် ပြည်သူ့ဘတ်ဂျက်များ စီးဝင်သွားသည်မှာ မဖြစ်သင့်သည့် အနေအထားများ ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် အစိုးရက ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှု၊ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများသည် လက်ရှိအခြေအနေကို ပြေလည်နိုင်မည့်နေနေသာသာ အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် မလွယ်ကူသည့် အနေအထား ဖြစ်သည်။
“ဗိုလ်ချုပ်ဈေးလို နေရာမျိုးက အဆောက်အအုံတွေ အဆင့်မြှင့်ဖို့၊ ပြင်ဆင်ဖို့ လုပ်မယ်ဆိုတာဟာ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်တာဟာ သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ ကန်ထရိုက်တွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ငွေကိုသုံးပြီး ပြည်သူအတွက် ဘာမှထိရောက်မှု အကျိုးရှိမှုမဖြစ်ရင် ဒါဟာ Mismanagement ဖြစ်တယ်။ Corruption လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေစီက အခွန်ကောက်ပြီး ပြည်သူ့ဘတ်ဂျက်နဲ့လုပ်မယ့် စီမံကိန်းတွေကို သေသေချာချာ စဉ်းစားသုံးသပ် လုပ်ဆောင်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်” ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာငွေများအား အများပြည်သူအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် နေရာများ၌ စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရေးမှာ များစွာအရေးပါပြီး ပြည်သူတို့အတွက် မှန်ကန်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ တာဝန်ရှိသူများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်တွင် မူတည်နေမည် ဖြစ်သည်။
Posted in Features, HeadlineTagged ဈေးLeaveaComment on ဈေးတွေကို အဆင့်မြှင့်ရမှာလား၊ လမ်းတွေကို ချဲ့ရမှာလား . . .
အငြင်းပွားဖွယ်ရာအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး အပါအ၀င် ဈေးဟောင်းလေးခုကို အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်မြို့လုံးရှိဈေးများ တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်အောင် ပြန်လည်တည်ဆောက်မည်ဟူသော မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ဟု အကြံပြု
ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ် အထိမ်းအမှတ် (၁၆) ခုမြောက် အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြား (၀ိုင်းပြထား) တပ်ဆင်ထားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးကို တွေ့ရစဉ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး၊ သိမ်ကြီးဈေး၊ အင်းစိန်ဈေးကြီးနှင့် မြို့နယ်အသီးသီးရှိ ဈေးဟောင်းလေးခုကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင် တည်ဆောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဈေးသစ်တည်ဆောက်ခြင်းသည် တစ်မြို့လုံးရှိ ဈေးများ တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်အောင် ပြန်လည် တည်ဆောက်မည်ဟူသော မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ဟု ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ကော်မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ခြောက်လအတွက် ရသုံးမှန်း ခြေငွေစာရင်း(လျာထားချက်) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာတွင် အကြံပြုထားသည်။
အဆိုပါ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ကော်မတီ၏ သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူး ဒေါ်မော်မော်သန်းက ဖတ်ကြားခဲ့သည်။
“ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ခြောက်လတာကာလအတွင်း လျာထားရေးဆွဲခဲ့သော ရငွေ၊ သုံးငွေစာရင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် ရငွေထက် ပိုမိုသုံးစွဲငွေမှာ ၃၇၁၀၉ ဒသမ ၆၁၆ ကျပ်သန်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါငွေမှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ဖြည့်စွက်ပေးခဲ့သော ထောက်ပံ့ငွေ ၂၀၈၄၇ ဒသမ ၆၇ ကျပ်သန်းအပြင် ၁၆၂၆၁ ဒသမ ၉၄ ကျပ်သန်း ပိုမိုသုံးစွဲကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ် ဘတ်ဂျက် လျာထားချက်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် မိမိဌာန၏ ရငွေနှင့်သုံးငွေခြားနားခြင်း နည်းပါးအောင် စီမံဆောင်ရွက်လျာထား သင့်ပါတယ်” ဟုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူး ဒေါ်မော်မော်သန်းက ပြောကြာသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနနှင့် အင်ဂျင်နီယာ (အဆောက်အအုံ)ဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် လျာထားချက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးမှ အဆောက်အအုံ ၁၄ လုံး၊ သိမ်ကြီး ဈေး အေရုံ၊ ဘီရုံပြုခြင်း၊ ပြင်ခြင်း၊ အင်းစိန်ဈေးကြီးများ ပြုခြင်း၊ ပြင်ခြင်းနှင့် မြို့နယ်အသီးသီးရှိ ဈေးဟောင်းလေးခုအား အဆင့်မြှင့်တင် ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းဈေးသစ်များ တည်ဆောက် ခြင်းသည် ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးတွင်ရှိသည့် ဈေးများ တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်အောင် ပြန်လည်တည် ဆောက်မည်ဟူသော ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ နှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ချေးငွေယူထားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး အတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သင့်၊ မသင့်ကိုလည်း ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်လျာထားချက်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက အနီးကပ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မည့် အရှေ့တောင်အာရှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် စတင်သုံးစွဲမည့် ၇၅၀ ဒသမ ၅၈၉ ကျပ်သန်း သုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဈေးများ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပြီး လိုအပ်သလို အဆင့်မြှင့်တင်လွှဲပြောင်းပေးရန်အချက်အား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်၍ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ခြောက်လအတွက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း(လျာထား ချက်) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာတွင် အကြံပြုထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းပေါ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးကြီးတွင် ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (YHT) ၏ ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် အထိမ်းအမှတ် (၁၆) ခုမြောက် အပြာရောင်ကဗ္ပည်းပြားကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်က တပ်ဆင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးကို ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် အရေးပါသည့်နေရာဖြစ်လာကာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရန်ကုန်မြို့နေ လူတန်းစားအသီးသီးအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ဖက်ရှင် အ၀တ်အထည်များ၊ လက်ဝတ် ရတနာများ၊ နေစဉ်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရာနှင့် အားလပ်ချိန် လည်ပတ်ရာ အဓိကနေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ ယင်းဈေးကြီးသည် မြို့နေများအတွက်သာမက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအား အနုပညာပစ္စည်းများ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများဖြင့် ဆွဲဆောင်နိုင်သော နေရာလည်းဖြစ်ရာ ယခုလို အဆင်မြှင့်တင် တည်ဆောက်မည်ဟု ဆိုသည့်အပေါ် မြို့ပြအမွေအနှစ်အချို့ ဆုံးရှုံးနိုင်မည်လားဟူသော သံသယဖြင့် ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသည်။
Posted in Headline, NewsTagged YHT, ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး, ဈေးLeaveaComment on အငြင်းပွားဖွယ်ရာအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး အပါအ၀င် ဈေးဟောင်းလေးခုကို အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်မြို့လုံးရှိဈေးများ တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်အောင် ပြန်လည်တည်ဆောက်မည်ဟူသော မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ဟု အကြံပြု
Posted in NewsTagged ရန်ကုန်, ဈေးLeaveaComment on ရန်ကုန်မီးရထား မြို့ပတ်လမ်းပိုင်းရှိ သမိုင်းဘူတာဈေးနှင့် တညင်းကုန်းဘူတာဈေးကို အန္တရာယ်ရှိသည် ဟုဆိုကာ ပြောင်းရွှေ့မည်